नयाँ टी–२० वरियता: सन्दीपको स्थान सुधार, पारस खस्किए ! - Everest Dainik - News from Nepal
नयाँ टी–२० वरियता: सन्दीपको स्थान सुधार, पारस खस्किए !
काठमाडौं: अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ टी–२० बरियताको ब्याटिङतर्फ नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्काकाे स्थान खस्किएको छ ।
आइसीसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको व्याटिङ वरियता अनुसार पारस ४ सय रेटिङका साथ ७५ स्थानमा खस्किएका हुन् । यसअघि उनी ६३ औँ स्थानमा थिए । केही दिनअघि थाइल्याण्डमा भएको एसीसी इस्टर्न रिजन प्रतियोगितामा गरेको खराब प्रदर्शनका कारण पारसको वरियतामा पनि धक्का लागेको हो ।
याे पनि पढ्नुस बीबीएलः पर्थविरुद्ध राशिद खानले लिए ३ विकेट
आइसीसीको नयाँ टी–२० वयरियताको ब्याटिङतर्फ पाकिस्तानी टिमका कप्तान बाबर आजम शीर्ष स्थानमा छन् । यस्तै, दोस्रोमा लोकेश राहुल, तेस्रोमा आरोन फिन्च, चौथोमा कोलिन मुनरो र पाँचौ स्थानमा ग्लेन म्याक्सवेल रहेका छन् ।
नयाँ टी–२० बलिङ वरियतामा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले भने दुई स्थान सुधार गरेका छन् । यसअघि ८६ औं स्थानमा रहेका उनी नयाँ वरियतामा भने ८४ औं नम्बरमा उक्लिएका छन् । टी–२० बलिङतर्फको शीर्ष स्थानमा अफगानिस्तानका स्पिनर राशिद खान छन् ।
अलराउण्डरतर्फ पारस २६ औँ स्थानमा यथावत रहेका छन् । करण केसीको वरीयता भने अलराउन्डरतर्फ खस्किएको छ । नयाँ वरियतामा करण ८८ औं स्थानमा छन् । यस्तै सोमपाल कामी ७३ औं स्थानमा यथावत छन् । अलराउन्डरतर्फ अफगानिस्तानका मोहम्मद नाबी शीर्ष स्थानमा छन् ।
ट्याग्स: आइसीसी, नेपाली क्रिकेट टिम, पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने